Miaramila sy basy - Tany Masina Tany Vietnam
4432 Views Prof. Assoc. Hung Nguyen MANH
I. Araka ny antontan-taratasy sasany, any Vietnam, nihira hoa mai [sÃºng hoa mai] (matchlock) dia anarana malaza amin'ny basy nihira eto thuong [sÃºng Ä'iá »ƒu thÆ ° Æ¡ng] (musket) dia tsy dia mahazatra ary nampiasaina tamin'ny taonjato faha-16 ka hatramin'ny taonjato faha-19. Andriambavy feodaly (Le, Mac, Trinh, Nguyen [LÃª, Máº¡c, Trá »‹ nh, Nguyá »… n]) matchlocks feno ho an'ny tafika. Ny firaketana ara-tantara sy literatiora dia nitantara ny ady tamin'izany fotoana izany: â € œNy bala manidina tahaka ny kintana nirehitraâ € Ny hira nataon'ny olona dia nandrakitra ny sarin'ny miaramila ho olona manana fitiavana ihany:
Fehikibo mavo manodidina ny valahany
Manao akanjo satroka marika, ny basy vita amin'ny soroka
Matchlock amin'ny tanana iray
Ny iray kosa nitana lefona ary nidina tany anaty sambo tamin'ny baikon'ny mandarin
Nisy feon-tsokosoko fehezanteny dimy mitohy
Ranomaso maso rehefa niditra tao anaty sambo.
[Ngang lÆ ° ng thÃ¬ a tháºt t Ä'ai vÃ ng
Ä áº§u Ä'á »™ i nÃ³n dáº ¥ u vai mang sÃºng dÃ i
Má »™ t tay thÃ¬ cáº¯p há» a mai
Má »™ t tay cáº¯p giÃ¡o quan sai xuá» 'ng thuyá »n.
ThÃ¹ng thÃ¹ng trá »'ng Ä'Ã¡nh ngÅ © liÃªn.
BÆ ° á »› c chÃ ¢ n xuá »'ng thuyá» n nÆ ° á »› c máº¯t nhÆ ° mÆ ° a]
Ny sarin'ny basy etsy ambany dia nalaina tamin'ny 1908 - 1909 in Hanoi [Hà Nội]. Izy io dia manampy antsika haka sary an-tsaina ny sarin'ny miaramila tamin'izany fotoana izany, talohan'ny Nguyen [Nguyễn] Dinisy.
Raha ny momba ireo trondro voalaza etsy ambony ireto, ireto misy antontan-taratasy sasany hanampy antsika hahatakatra azy ireo:
II. Musket no karazana arquebus farany ao amin'ny tafika tafika Vietnamianina mandritra ny dinastian'i Mac, Trinh, Nguyen [Mac, Trá »‹ nh, Nguyá »… n] (nanomboka ny taonjato faha-17). Ny fitambaran'ny hozatra dia nanahaka ny hetsiky ny henatra henjana misy sombin-tany. Ny teknikan'ny fandidiana dia toy izao manaraka izao: â € œvoasintona ny mpisintona; mikepoka ilay akora mba hanaparitahanaâ €, izay midika hoe: âSitraka ny fihodinam-boho mankeny; apetraho ao anaty tady ilay farango itazonana azy. Rehefa misintona ny mpitifitra isika dia mihetsika ary hikasika ny sombin-tsolika iray izay manafaingana ny poa-basy.
Araka ny John Pinkerston1, Tompo Nguyen [Nguyễn] nanamboatra ny tafiny tamin'ity karazana nihira eto thuong [sÃºng Ä'iá »ƒu thÆ ° Æ¡ng] (muskets), fantatra ihany koa nihira hoa mai [sÃºng hoa mai] (matchlocks).
Ny antontan-taratasy iray hafa koa dia mampiseho fa tamin'ny tarana-mpanjaka Qing (Shina), dia misy karazana matchlock lehibe iray izay mitaky olona roa hampiasa azy ireo: Ny iray hametraka ny basy eo an-tsorony ary ny iray ho toy ny point point.
In i Vietnam [Việt Nam], ity karazana basy ity dia aseho amin'ny tranom-bakoka. Araka ny voalaza, ny Tay Son [TÃ ¢ y SÆ¡n] nahazo ny teknika voalaza etsy ambony ireo ny tafika Dang Trong [Tràng Trong] (Vietnam any atsimo tamin'ny taonjato faha-17) ary nihatsara amin'ny karazana maro hafa. Ireo tafika dia nampiasa fitaovam-piadiana ity noho ny fanaony andavanandro. Na izany aza, ao Dang Ngoai [Đàng Ngoài] (Vietnam Avaratra tamin'ny taonjato faha-17), ity teknika ity dia nampiasaina tamin'ny ady ara-pahefana nandritra ny roanjato taona. Tahaka ny rano sy afo fotsiny, Tompoko Trinh [Trinh] dia nomena anarana Thuy Vuong [Thuỷ Vương] (Ry Tompon'ny rano) noho ny hery mahery any; Tompo Nguyen [Nguyễn] dia nomena anarana Hoa Vuong [Hoả Vương] (Tompon'ny afo) noho ny heriny dia feno fitaovam-piadiana mahery vaika. Ankoatra izany, Tompoko Nguyen [Nguyễn] nanana fitaovam-piadiana hafa fahita amin'ny tafika toy hoa ela [hoả lava] (dragona afo), hoa ho [hoả hổ] (tigra) ary basy miaraka amin'ny sombin-taratasy miasa toy ny baomba tsotra.
Tamin'ny voalohany, ny musket (flintlock) dia avy any Eropa, avy eo nampidirina tany Amerika sy Azia. The Tay Son [TÃ ¢ y SÆ¡n] tafika dia noheverina ho tafika matanjaka noho ny fihavanan'izy ireo izay tsara kokoa amin'ny lafiny teknika (inefatra efatra no ilaina) raha ny tafika anglisy sy eoropeana dia mila hetsika roapolo. Indrindra indrindra, ny basy Qing (Sary) dia nitifitra moramora saingy may setroka be dia be. Emperor Quang Trung [Quang Trung] nampiasa basy io tamin'ny tolona ka nivadika ho mainty ny akanjony satria setroka.
Miaramila sy mpitifitra tamin'ny andro taloha (Loharano: Nguyễn Mạnh Hùng ao amin'ny “Kỹ thuật của người An Nam” - Technique du peuple Annamite an'i H. Oger (1908 -1909) tany Hanoi)
Ny tady na tapa-tsipika dia nampiasaina tamin'ny matchlocks. Taty aoriana, vita ny basy vita amin'ny basy lava kokoa, izay nampiasa fitazonana detonador sy baoritra mitovy amin'ny basy eoropeana tamin'izany. Na izany aza, mandritra Minh Mang's [Minh Mạng] mpanjaka, novana sarina basy ny matchlocks (noho ny fampihenan'ny hery miaramila) fa miaraka amin'ny isa miadana kokoa raha oharina tamin'ny taonjato teo aloha, olona folo no nitazona basy iray.
Araka ny fitsipika ao amin'ny Nguyen [Nguyễn] Dinastika, nozaraina roa karazana ny tafika: miaramila mpiady sy miaramila fiarovana. Nisy miaramila mpiaro no voafantina Nghe An [Nghe An] Binh Thuan [Binh Thuan], izay napetraka tao Hue [Hue]. Nandritra ny ady teo amin'i Frantsa sy Vietnam tany Avaratra, Hue [Hue] ny fitsarana dia nandefa miaramila 8,000 hiaro ny Avaratra i Vietnam [Việt Nam], eo ambany fahefan'ny mandarins arts martial. Nisy miaramila niady napetraka tany Avaratra. Taorian'izany dia, nandritra ny fiarovana ny Frantsay dia nosoloina amin'ny linh kho xanh ireo miaramila (miaramila misy fehikibo manga) (Figure). Ny miaramila vitsivitsy sisa dia teo ambany fifehezan'ny governemantam-paritany.
1: JOHN PINKERSTON "Jeografika maoderina: famaritana ny fanjakana, fanjakana, fanjakana ary zanatany miaraka amin'ireo ranomasina sy ranomasina ary nosy".
Image Sary asongadina - loharano: faxuca.blogspot.com, nam64.multiply.com
◊ TRADISIONAL LITERATURA sy ARIKA ARON'I VIETNAM - Fizarana 1
◊ TRADISIONAL LITERATURA sy ARIKA ARON'I VIETNAM - Fizarana 2
◊ TRADISIONAL LITERATURA sy ARIKA ARON'I VIETNAM - Fizarana 3
(Visited 3,268 fotoana, 1 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← TRADISIONAL LITERATURA sy ARIKA ARON'I VIETNAM - Fizarana 3
Karazan 'ny SEKOLY MAMPIASA ARIKA amin' ny alalan 'ny DIDIA FAMPIANARANA →
Comments Off amin'ny Maurice DURAND (1914-1966, 52 taona)
Fitsidihana anio: 334
Andro farany 7 nitsidika: 2,309
Total visits: 420,560